अराजनीतिक आरोपपत्र निःशर्त फिर्ता भए विवाद सकिन्छ : रिमाल – Kanika Khabar
अराजनीतिक आरोपपत्र निःशर्त फिर्ता भए विवाद सकिन्छ : रिमाल
Kanika Khabar ७ मंसिर २०७७, आईतवार १३:५८ November 22, 2020 मा प्रकाशित
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व तहमा उत्पन्न पछिल्ला विवादले राजनीतिक क्षेत्र परिदृश्य तातिएको छ ।
कार्यकर्ता तहमा घर झगडाकै कारण पार्टी कतै विभाजनमा पुग्ने त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका माध्यमबाट करीब दुई तिहाइको जनादेशपछि जनभावनानुसार एकताबद्ध नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सचिवालयका पाँच सदस्यका असन्तुष्टि र आरोपपत्र सार्वजनिक भएपछि अब हुने सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्ने जवाफलाई प्रतीक्षाका साथ हेरिएको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको अंश /
केही साथीहरुले स्थायी कमिटी बैठकको माग गर्नुभयो । विरोधहरु सुनिन थाले । त्यसयता विश्वव्यापी महामारीका रुपमा कोरोना भाइरस हामीले सामना गरिरहेका छौँ । त्यहीबीचमा भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा लामो छलफलपछि कार्यदल गठन गरी त्यसको सुझावका आधारमा भदौ २६ गतेभन्दा अगाडिका विवाद, कमजोरी र समस्यालाई ‘कट अफ डेट’ मानेर अघि बढ्ने भन्ने निर्णय भएको सबैलाई थाहा छ ।
राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा पनि परामर्श भएको हो भनेर प्रधानमन्त्री भनेका कुरा बाहिर पनि आइसकेको छ । डा युवराज अतिवडालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजदूतमा अध्यक्ष दाहालकै प्रस्ताव हो । निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत बनाउने पनि सहमति र जानकारीमै भएकै हो । प्रधानमन्त्रीले परामर्श भएको हो भनिसकेपछि यति कुरामा उहाँले ढाँट्नुभयो होला भनेर कसरी भन्ने ? मन्त्रिपरिषद्मा अर्को एक जना पनि राजदूतका लागि सिफारिश आउँदा प्रधानमन्त्रीले यसमा परामर्श हुन बाँकी छ भन्नुभएको पनि मन्त्रीहरुबाटै आएको छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले आफूखुशी वा एक्लै गर्न नखोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
जवाफमा मोदीले आफूले विशेष दूत पठाउँछु भन्दा प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भन्नुभएको हो । अर्को देशका प्रधानमन्त्रीलाई आफूसँग भेट्न फलानो व्यक्तिलाई पठाइदिनू भनेर त भन्न मिल्दैन होला ! सोहीबमोजिम भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल आएर भेटेर जानुभयो । त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा नोट टिपाइएको छ, भेटबारे सार्वजनिक जानकारी दिइएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समाधानमा एक प्रकारको वार्ताको थालनी भएको छ, यसमा त नेताहरुले सरकारको प्रशंसा गर्नुपर्ने होइन र ? यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्री ओली जस्तो स्वाभिमान व्यक्तिको राष्ट्रवादमाथि हिलो छ्याप्न खोज्नु आफ्नै अनुहारमा कोपर्नुसरह हो । सीमा समस्या समाधान भएर प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता बढ्दा पार्टीको पनि लोकप्रियता बढ्ने होइन र ?
अहिले अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पियो कुनै बेला यहाँका खुफिया एजेन्सीका निर्देशक थिए, अनि के उहाँ आएर भेटवार्ता गर्नुभयो भने अमेरिकी गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिलाई किन भेट्यो भन्ने ?
यसमा मेरो भनाइ के छ भने हामीले आफ्नो शक्ति र हैसियतमा विश्वास नगर्दा यस्ता टिप्पणी आएका हुन् । विदेशी हस्तक्षेप केका लागि आवश्यक छ र ? अध्यक्ष पार्टीले चयन गर्ने हो, प्रधानमन्त्री संसद्ले बनाउने हो । विगतमा भारतले यहाँको ‘माइक्रो म्यानेजमन्ट’ गरेको भनिन्थ्यो “अब नगर” भनेका होइनन् र नेताहरुले ?
यो अबको बहसको विषय हो । तत्कालीन एमालेमा पार्टी वा सरकारको कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालसम्म रहन पाउने भन्ने विधि बनाइएको थियो । साथै सक्रिय राजनीतिका लागि ७० वर्षे उमेर हदबन्दी पनि थियो । विगतमा मैले नेतृत्व गरेको ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) मा त ६० वर्षे उमेर हदबन्दी कार्यान्वयन भएको थियो । नेकपा गठनपछि ती प्रावधान हटाइए । अबका दिनमा पुस्तान्तरण गर्न जरुरी छ, दोस्रो पुस्ता तयार हुनुपर्छ । यसको छिनोफानो महाधिवेशनले गर्नेछ । राससबाट
माघ १५ गतेदेखि बिद्यालय खुल्ने
आज राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : आठ मतदान स्थल, १४ मतदान केन्द्र
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न निर्वाचन आयोगको आग्रह